Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah iyo Martingale | vfxAlert official blog
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah iyo Martingale
Ganacsi iyadoo la adeegsanayo mabda 'Martingale' waxaa si joogto ah looga helaa xulashooyinka ikhtiyaariga ah ee koorsooyinka cusub, inkasta oo marka la eego tirada kaydadka lumay ay qaadanayso kaalinta koowaad iyada oo farqi weyn u dhexeeyo tartamayaasha. Xeelado cusub iyo la taliyayaal ayaa si joogto ah u soo muuqda, hababka "smart martingale" iyo waxyaabo kale oo la yaab leh. Suuqa ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah sidoo kale dhinac uma istaagin, maqaalkan, waxaan isku dayi doonaa inaan fahano haddii ay jirto istiraatiijiyad ganacsi oo martingale ah oo faa'iido leh mise waa farsamo suuq geyn ah oo lacag looga helo ganacsatada.
Si kooban oo ku saabsan istiraatiijiyadda. Ereygu wuxuu ka yimid adduunka khamaarka wuxuuna siinayaa koror mugga sharadka hadda la barbar dhigo kii hore si loo magdhabo khasaarihii hore. Marka ka dib markii aan luminay $ 10, waa inaan ku khamaarno midka soo socda $ 20 iyo wixii la mid ah. Waa in la ogaadaa in farsamadan laga mamnuucay inta badan casinos iyo guryaha khamaarka. Aynu dhammaysano socdaalkeenna taariikhda oo aan u gudubno xulashooyinka ikhtiyaariga ah .
Noocyada martingale ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Markaad tixgelineyso xulashooyinka loogu talagalay isticmaalka Martingale ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah , waa inaad marwalba xusuusnaataa in cabirka macaashka suuqani uu go'an yahay oo aanu is-beddelin inta lagu jiro muddada doorashada oo dhan. Waxaa jira barxad ganacsi oo ikhtiyaari ah oo kuu oggolaanaya inaad xirto macaamil ganacsi kahor taariikhda dhicitaanka oo leh faa iido yar, laakiin tani waa mid ka reeban sharciga.
Marka laga reebo xulashooyinka turbo, faa'iidada faa iidada ayaa ka yar 100% tanina ma ogola in la xiro macaamil hore oo khasaaro sameynta iyadoo si fudud loo labanlaabayo mugga kan xiga, sida lagu sameeyo suuqa Forex. Waa kuwan tusaalooyinka xulashooyinka:
Taxanuhu ha ka bilaabmaan ikhtiyaarka EUR / USD, oo lagu xiray luminta $ 10 iyo faa'iidada la qorsheeyey ee $ 8.5 (85% qadarka xulashada). Si loo magdhabo khasaaraha loona sameeyo macaash, macaamilka xiga waa inuu lahaadaa dakhli dhan $ 18.5 = $ 10 (khasaaro ikhtiyaari hore) + $ 8.5 US (faa'iido 85%). Xisaabinta ka dib, waxaan heleynaa mugga macaamilka labaad oo u dhigma 22 doolar, hubi macaashka: $ 22 * 0.85 (85%) = $ 18.7.
Sida aad u aragto, si loo magdhabo khasaaraha iyo faa'iidada, istiraatiijiyadda binary opti ons waxay u baahan tahay inay isticmaasho isugeyn 2.2 ah, taas oo ka sarreysa tan Forex, halkaasoo mugga labanlaabku ku filan yahay. Xaqiiqadani waxay dhigeysaa dalabyo badan oo ku saabsan xajmiga dhigaalka, iyo celcelis ahaan ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo ka yar 75-85%, isticmaalka martingale ayaa xitaa qaali ah oo khatar badan leh.
Immisa lacag ah ayaa loo baahan yahay?
Yaanan qorin qoraal fara badan, laakiin kaliya xisaabi deebaajiga ganacsiga ee martingale iyadoo lagu saleynayo tusaale qaybta hore. Marka shuruudaha gelitaanka waa sida soo socota:
Qaddarka ikhtiyaarka koowaad : $ 10
Faa'iidada la qiyaasay : 85%
Tirada xirfadaha luminta isku xigta : 5.
Natiijo ahaan, waxaan helnaa miis:
Qadarka xulashada, $
Bixinta ikhtiyaarka, $
Faa'iido / Khasaare, $
Lacagta dhigaalka ah ee loo baahan yahay, $
Xogta xisaabinta maahan mid aad u dhiirrigelin ah: xitaa iyadoo ugu yaraan bilowga ugu hooseeya ee $ 10, shan ganacsi oo lumay oo isku xigta ay u baahan yihiin in ka badan $ 900 oo laga helo deebaajiga ganacsiga. Haddii akhristayaashu u maleynayaan in taxaddar luminta dheer ee ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , waxaan ku deg degnaa inaan "u xaqiijino" iyaga: xaaladaha noocan oo kale ah waxay si joogto ah u dhacaan, gaar ahaan marka la adeegsanayo la taliyayaasha iyo xilliyada yar yar ee bilowga ah ay aad u jecel yihiin. Mustaqbalka, kharashku wuu sii kori doonaa xitaa dhakhso badan, qof walbana waa inuu go'aansadaa naftiisa haddii khataraha ganacsi ee noocan oo kale ah ay lagama maarmaan u yihiin faa'iido hoose ama aan ahayn.
Istaraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah iyo martingale
Ganacsiga Martingale ma isticmaalo istiraatiijiyad gaar ah oo gaar ah oo "koorsooyinka qoraaga" ay jecel yihiin in laga hadlo. Faa'iidada waxaa laga helaa oo keliya qeybaha isbeddelka ee suuqa, iyo haddii istiraatiijiyaddu ay ku wanaagsan tahay go'aaminta dhibcaha bilowgiisa iyo dhammaadkeeda, way waxaa loo adeegsan doonaa heshiis labalaab ah Doodda ugu weyni waxay khusaysaa mugga macaamillada dambe si loo magdhabo khasaaraha - qaababka qaarkood, waa mid go'an, kuwa kalena, way "dul sabbaysaa" iyadoo ku xidhan hadba inta khasaaruhu hadda le'eg yahay iyo wadarta guud ee jagooyinka furan. Laakiin macnaha xisaabiyadan xisaabeed isma beddelo: istiraatiijiyadda ganacsigu waa inay siisaa ugu yaraan 7 ka mid ah 10ka qodob ee faa'iidada leh si loo furo ikhtiyaar.
Tusaale ahaan istiraatiijiyad leh faa iidada 70%, aan soo qaadano kooxo celcelis ahaan dhaqaaqaaya.
Muhiim: xulashooyinku ma furna ka hor inta aan la xirin ama la furin kal-fadhiyada ganacsiga, galabnimada Jimcaha, xilliga la daabacayo wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba kooxood oo celcelis ahaan dhaqdhaqaaq fudud (SMA) ah: "dhakhso" iyo "gaabis". Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in la sifeeyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah iyo ganacsiga xitaa inta lagu jiro xilliyada guryaha, inkasta oo xaaladdan aan lahayn Martingale.
Hantida ganacsiga: dhammaan hantida isbeddelka ah marka laga reebo labada lammaane ee iskutallaabta ah;
Waqtiga: laga bilaabo M30 iyo wixii ka sareeya. Xilliyada hoos u dhaca isbeddelka, saacadda lagu taliyay (H1);
Muddooyinka dhexdhexaadka ah: "soon" casaan - 15, 12, 10, 8, 5, 3. buluug "gaabis ah" - 60, 50, 40, 35, 30
"Si tartiib ah" SMA ugu soo noqo sida soo socota: 30 ... 35 ... 40 ... 45 ... 50 ... 60, oo xaqiijinaysa kor u kac;
"Degdeg" sidoo kale wuxuu la socdaa amarka 3 ... 5 ... 8 ... 10 ... 12 ... 15. Iyaga ayaynu ka raadinaynaa bilowga iyo dhammaadka soo noqoshada qiimaha iyo saxitaanka;
Ku fur ikhtiyaarka dhicitaanka 3-5 shumac ka dib markaad xirto baarka, kaas oo labada xaaladoodba lagu buuxiyo;
Kooxaha celceliska celceliska ayaa hoos ugu dhacaya amarka ka soo horjeedka xaaladda Wicitaanka;
Barta laga soo galo waa inta u dhexeysa 3-4 shumac, marka waad furi kartaa ka dib markaad ka gudubto kooxda "gaabis" dhowr ah "dhakhso ah".
Istaraatiijiyaddu way fududahay waxayna u adeegsan kartaa Martingale si ay u daboosho khasaaraha, ganacsade walbana waa inuu doortaa xulkiisa saamiga kordhay iyadoo kuxiran xaaladda suuqa iyo baaxadda dhigaalka. Ma jiri karaan xalal caalami ah, in kasta oo ay damaanad qaadayaan qorayaasha istiraatiijiyado lacag bixin iyo la taliyayaal.
In kasta oo wax waliba jiraan, ganacsiga noocan ah ayaa weli caan ah. Aynu siino xoogaa talooyin ah oo ka caawin doona ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u adeegsada Martingale:
Martingale lama mid aha ganacsiyada muddada-gaaban ama xoqidda. Waqtiga dhaca iyo waqtiga ayaa noqon kara wax kasta min hal daqiiqo illaa afar saacadood iyo maalin. Sida istiraatiijiyad kale oo falanqeyn farsamo ah, marba marka ka sii dambeysa ee waqtiga ay sii egtahay, ayaa calaamadaha lagu kalsoonaan karo yihiin.
Gabagabada cutubkoodii hore - iska iloobaan xulashooyinka turbo! Waxaa ugu horayn bixisay fiiro gaar ah u iibinaya istaraatijiyad fursadaha binary iyo dilaaliinta binary, laakiin waxa ay halkan waa in tirada ugu badan ee calaamadaha been ah iyo xigashooyin aan suuqa.
Waxaan ku bilaabaynaa qadarka ikhtiyaarka ugu yar ee la oggol yahay. Xitaa haddii aad haysato kumanaan doolar oo dhigaal ah, waa inaadan isku dayin inaad kordhiso macaamilka bilowga ah. Had iyo jeer ka digtoonow khasaaraha ka dhalan kara.
Waxaan si joogto ah u qaadanaa faa'iido. Martingale had iyo jeer wuxuu u horseedaa oo keliya khasaaro, markaa isticmaal xilliyada isbeddel xoog leh illaa ugu badnaan.
Xulo taariikhda dhicitaanka saxda ah. Muddada xulashadu waa inay ahaataa ugu yaraan 3-5 baararka waqtiga shaqada. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad sugto daqiiqado sixitaan muddo-gaaban ah iyo dib-u-celin ka hor intaadan dib u bilaabin isbeddellada.
Waxaan kormeernaa isbeddelada suuqa. Ma jiro farsamo ganacsi oo bixinaysa 100% dammaanad, haddii ka dib markii 2-3 fursadaha luminta ee isku xigta aad ogaato inaad khalad ka gashay jihada isbeddelka, waxaad u baahan tahay inaad joojiso. Ku dar mug, fur ganacsiga ka soo horjeeda oo ha kordhin qasaaro.
Aan soo koobno . Ma jiraan wax faa iidooyin ah oo ku saabsan ganacsiga martingale marka la barbar dhigo istiraatiijiyadaha xulashooyinka kale? Kama jawaabi kartid oo waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee kordhinaya macaamillada soo socda. Ganacsiga noocan ahi waa kan ugu halista badan xitaa suuqa Forex, iyo ikhtiyaarrada, wuu kordhayaa marar badan. Waxaa jira laba sababood oo waaweyn, oo aan wax laga qaban karin:
Boqolleyda macaashku way kayar tahay 100% xaaladaha badanaana, suurtagal ma ahan in goor hore la xiro macaamillada, xitaa iyadoo macaashku yar yahay.
Waqtiyada yar yar, taxanaha luminta dheer ee ikhtiyaariyada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah maaha kuwo aan caadi ahayn sababtoo ah doorashada khaldan ee waqtiga dhicitaanka. Suuqa Forex, macaamillada waa la furi karaa si aan xadidnayn illaa inta Amarka Khasaaraha Qaadashada / Joojinta uu kor iyo hoos u socdo ama boosku gacanta ku xiran yahay. Ikhtiyaarka ayaa laga yaabaa inuu dhammaado daqiiqado yar ka hor inta uusan suuqa u dhaqaaqin jihada aan u baahannahay, iyo maxay noqon kartaa khasaaraha ka akhriya qaybta cabbirka dhigaalka.